Nezvedu - JIANGSU RICHENG MEDICAL CO., LTD
Kugadziridzwa kwechigadzirwa, kwakawedzera kuvimbika, kuchishandiswa, kwakachengeteka, kwakachipa
ISO13485 + CE certification, RoHS uye isvike certification
15 utility modhi yekugadzira patents
Inogona kuve yakagadzirirwa maererano nezvinodiwa nevatengi
Jiangsu Richeng Medical Co, Ltd inobatsira yekudyara kwega neJiangsu Richeng Rubber Co, Ltd inyanzvi yekugadzira yezvokurapa. Kuburikidza nehunyanzvi hwechigadzirwa chekurapa chigadzirwa chekutsvaga, kusimudzira uye kugadzira, tinopa yakavimbika, yakachengeteka uye inoshanda zvigadzirwa zvekurapa. Iyo kambani ine yakakwana kugadzirwa uye yekuedza michina, advanced kugadzira tekinoroji, ine yakakwirira-mhando maneja, tekinoroji uye vashandi vekugadzira.
Iyo kambani yakagadzira yakakwana ISO9001 yepasi rose certification system, uye yakapfuura ISO13485 quality system certification uye CE certification, ichivavarira kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando uye mabasa ekutanga-kirasi. Neanopfuura makore makumi maviri eruzivo mumidziyo, kutsvakisa nekusimudzira, dhizaini yekugadzira, kuvandudza zvigadzirwa uye manejimendi chirongwa, kambani yedu yanga iri chinzvimbo chinotungamira muindasitiri, uye zvigadzirwa zvedu zvakaendeswa kune nyika dzinopfuura makumi maviri nematunhu, mumwe waanofarira wevakawanda veindasitiri vatungamiriri.
Tine vaviri Mukati uye vekunze R&D timu, yedu yemukati R&D timu inonyanya kusanganiswa yevanoita mainjiniya anopfuura makore gumi ezviitiko; Yedu yekunze R&D timu iboka revanyanzvi vezvokurapa vane hupfumi hwekiriniki ruzivo. Vanotarisa pakufunga kwakanaka kwezvinhu zviripo uye kusikwa kwezvigadzirwa zvitsva.
Richeng akabata zvigadzirwa gumi nezvishanu zvekushandisa patents.